Umthondo - Wikipedia
Umthondo (ubuningi bamapipi noma amapeni / -niːz /) yisitho sokuqala socansi esisetshenziswa izilwane zesilisa ukusabalalisa abesifazane (noma ama-hermaphrodites) ngesikhathi sokuhlangana. Kuzo zonke izinhlobo zezilwane, nakulezo zinhlobo lapho owesilisa ethwala khona okubizwa ngokuthi yipipi, imithondo yezinhlobo ezahlukahlukene akusho ukuthi ngeyokuhlobisa.
Igama elithi ipipi lisebenza ezithweni eziningi ezingenayo, kepha hhayi kubo bonke. Njengesibonelo, isitho esingena ngaphakathi se-cephalopoda esiningi yi-hectocotylus, ingalo ekhethekile, nezicabucabu zesilisa zisebenzisa izinyawo zazo. Ngisho ngaphakathi kweVertebrata kunezinhlobonhlobo ze-morphological ezinamagama athile, njenge-hemipenes.
Ezinhlotsheni eziningi zezilwane lapho kukhona isitho esingahle sichazwe njengepipi, asinomsebenzi omkhulu ngaphandle kokungenelela ngaphakathi, noma okungenani sidlulisela isidoda kowesifazane, kepha ezilwaneni ezincelisayo ezingamaphosta umthondo uthwala ingxenye ekude kwe-urethra, ekhipha womchamo womabili ngesikhathi sokuchama kanye nesidoda ngesikhathi sokuhlangana.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Umthondo&oldid=88196"
Last edited on 19 uNtulikazi 2021, at 15:33
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-19 uNtulikazi 2021, nge-15:33.